सामूहिक नेतृत्वले दलभित्र द्वन्द्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
आयुर्वेदको विस्थापन : आफ्नै पाइला मेट्दै
‘बा र बाजेको पालामा हाम्रोमा राणा र राजादेखि जनतासम्मको घुइँचो हुन्थ्यो, तर हाम्रा पालामा त विदेशी मात्रै उपचारमा आउँछन् । उनीहरू त यहाँ हुँदा मात्र हैन,स्वदेश पुगेर पनि मलाई यस्तो भयो के खाने, औषधि पठाइदिनुस् भन्छन् ।’
भाद्र १५, २०७७ बिनु पोखरेल
हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो मूलस्थली हो कता ?भाषाभूषण भेष संस्कृति कला आदर्श शैली कता ?कस्मा छन् थरका थला तल हुँदा थारू कसोरी भयो ?जेठो वेद हिमाल हो सकलको कैलाश साक्षी छ यो ।।
योगी नरहरिनाथका हस्तलिखित उपर्युक्त पंक्तिमा हाम्रा जीवनशैलीमा भित्रिएका बित्पाते प्रवृत्तिको चिन्ता छ । यस लेखको उठान पनि यही हो, संसारले आफ्नो बनाउन उद्यत रहेका हाम्रो जीवनशैली र संस्कृति हामी आफैं भने छोडेर कहाँ जान खोजिरहेछौं ।
हामीले आफ्ना धेरै संस्कृति त गुमाइसकेका छौं । खाना खानुअघिसम्म लगाएका लुगा फेरेर सेतो धोती लगाई हातपाउ धुने, पलेटी कसेर बस्ने, खाना चढाएर खाने, नबोली खाने, अन्त्यमा अलिकति खाना जनावर वा चराचुरुंगीलाई दिने परम्परा कति जीवनोपयोगी रहेछ ! धर्मको ठेक्का लिनेदेखि वर्ग हटाउन लागेका उग्र क्रान्तिकारीसम्म सबैका आदर्श पूरापूर समेटेको छ हाम्रो वैदिक संस्कृतिले । तर बारीभरि भएको हीरा बेच्न लैजाने दुःखका कारण बारी नै बेच्ने मूर्खको कथाभन्दा फरक छैन हाम्रो अवस्था । अहिले कोरोना महामारीले हाम्रो आइसोलेसन संस्कृति सुसंस्कृत जीवनका लागि कति उत्कृष्ट थियो भनेर सम्झाइदिएको छ । नमस्कार संस्कृति मात्र पनि कति प्रयोगात्मक रहेछ, यस बेला संसारले यसैको सिको गरिरहेबाट बुझ्न सकिन्छ । पहिला आयुर्वेद के हो, त्यो हेरौं ।
आयुर्वेद अर्थात् उमेरको शास्त्र
वेदहरूमध्ये आयुर्वेद हाम्रो जीवनका सबै पाटा जोडिएको ग्रन्थ हो । आयुर्वेद संस्कृत शब्द हो । यो शब्द आयुस् र वेदको समास भएर बनेको छ । आयुस् भनेको आयु र वेद भनेको ज्ञान या शास्त्र । आयुर्वेदको अर्थ आयुको शास्त्र अथवा जीवनशास्त्र भन्ने हुन्छ । आयु कसरी लामो बनाउने, आयु रहुन्जेल कसरी स्वस्थ रहने, स्वस्थ रहन के गर्ने/नगर्ने आदि सदाचारदेखि रोग लाग्दा मात्र हैन रोगै लाग्न नदिन के गर्ने भन्ने विषयको समग्र शास्त्र हो आयुर्वेद । आयुर्वेदले वात, पित्त र कफमा केन्द्रित भएर उपचार गर्छ । अर्थात्, शरीरमा पस्ने तीन कुरा विचार, खाना र हावा दूषित भयो भने हामी बिरामी हुन्छौं । उपचार भनेको औषधिभन्दा धेरै विचारशुद्धि हो, जुन हाम्रा संस्कृतिले नै बोकेर आएका छन् ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँको हावापानी राम्रो भन्दा हावा प्याक गरेर सप्लाई गरौं भन्दै विद्वान् महानुभावहरूले उडाउनुभयो । उहाँहरूले इतिहासविद् महेशराज पन्तले ४१ वर्षअघि लेख्नुभएको कुरा हेर्नुपर्ने म ठान्दछु— शुक्लयजुर्वेद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत र आयुर्वेदको शल्यक्रियासम्बन्धी ग्रन्थ सुश्रुतसंहिताको सबैभन्दा पुरानो लेखोट नेपालको पुस्तकालयमा भेटियो । कहीँ रहन नसकेको हजार वर्षअघिको त्यो पुस्तक हाम्रा पुस्तकालयमा उस्तै रहनुमा नेपाल खाल्डोको समशीतोष्ण हावापानी हो (पन्त, अन संस्कृत एजुकेसन, सन् १९७९, पृ. १११–११२ ) ।
आयुर्वेदले भन्छ, २,००० मिटरभन्दा अग्ला पहाडका सबै वनस्पति जडीबुटी हुन् । नेपालमा बाह्रै महिना हिउँ पर्ने उच्च हिमाली भूभाग १५ प्रतिशत छ, जहाँको जडीबुटी मात्र हैन माटो र पानी पनि औषधि मानिन्छ । समयसमयमा हिउँ पर्ने ६८ प्रतिशत भूभाग छ नेपालमा, जहाँ बहुमूल्य जडीबुटी र वनस्पति पाइन्छन् । वेदमै भनिएको छ, हिमाली क्षेत्रका त प्राकृतिक हावा, पानी र माटो पनि औषधि हुन् । अथर्ववेदमा भनिएको छ, यदि केही गर्दा रोग सन्चो भएन भने हिमालमा गएर बस (अथर्ववेद प्रथम काण्ड, रोग उपशमन सूक्त, अपांभेषज सूक्त) ।
तराईका भावर क्षेत्रमा तपस्या गर्न सकिने कुरा भएन । त्यसैले योग, ध्यान र आयुर्वेदको केन्द्र भूमि, भारतवर्षका अधिकांश ऋषिले तपस्या गरेको तपोभूमि हो— नेपाल । आफ्ना संस्कृतिलाई असभ्य ठानेर हामीले हाम्रो होइन भन्यौं, अरूले आफ्नो बनाउँदै गए । आज योग र आयुर्वेदमा भारतको नाम छ । भारत मात्र हैन, अहिले पश्चिमाहरूले अविकास, गरिबी, सूचनाको कम पहुँचको बावजुद नेपालीहरू किन यति खुसी छन् भनेर खोजी गरे र यसको कारण एलोप्याथीको कमभन्दा कम प्रयोग र आयुर्वेद उपचार पद्धति रहेको ठम्याए । त्यसैले उनीहरूले हाम्रो योग, ध्यान, तपस्याको पश्चिमीकृत शब्द नै बनाएर आएका छन् । अब कहिलेदेखि आयुर्वेदमा आफूलाई पारंगत भन्दिन्छन्, अनि हामी हेरेको हेर्‍यै हुन्छौं ।
आयुर्वेद ब्रह्माण्डको उत्पत्तिसँगै आएको ज्ञान हो । तर हामीसम्म आइपुग्नका लागि हजारौंहजार वर्षको अनुभव यसमा मिसिएको छ । एउटा एलोप्याथिक औषधि आज तयार भयो भने भोलि त्यसको ठाउँमा अर्को तयार गर्नुपर्छ किनकि त्यसले काम गर्न छोडिसक्छ । आयुर्वेद १० हजार वर्षअघि पनि जे थियो, अहिले पनि त्यही छ किनकि यो प्राकृतिक हो । यस्तो सशक्त ज्ञान हामी खोज गर्न त सक्दैनौं–सक्दैनौं, आफ्ना पुर्खाले तयार गरेका यस्ता ज्ञानको संरक्षणका लागि कसैले केही भनिहाल्दा पनि त्यसबारे बुझ्नुको साटो आफ्नो बाँझो बुद्धिमा पानी पस्न नदिन समय खर्चिरहन्छौं ।
हामी आफ्ना यस्ता संस्कृति छोडेर एलोप्याथीतिर भीड लागिरहँदा विदेशीहरू भने आयुर्वेदिक उपचारमा घुइँचो लागेका छन् । आयुर्वेदसम्बन्धी अध्ययन गर्दैगर्दा म एक दिन काठमाडौंस्थित असनको पीयूषवर्षी औषधालयमा पुगेकी थिएँ, जुन १५० वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । पुस्तौंदेखि उपचारमा संलग्न हुँदै आएका त्यस औषधालयका सञ्चालक मधुवज्र वज्राचार्य भन्नुहुन्छ, ‘बा र बाजेको पालामा राणा, राजादेखि जनतासम्मको घुइँचो हुन्थ्यो, तर हाम्रा पालामा त विदेशीहरू मात्र उपचारमा आउँछन् । उनीहरू त यहाँ हुँदा मात्र हैन, उतै घर पुगेर पनि मलाई यस्तो भयो के खाने, औषधि पठाइदिनुस् भन्छन् । अनि यहाँबाट पठाउने गरेको छु ।’
नेपालमै पनि धेरै जना अस्पतालका रिपोर्ट बोकेर आफूकहाँ आउने गरेको बताउनुहुन्छ, दस पुस्तादेखि आयुर्वेदमार्फत उपचार गराउँदै आएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो श्रीकृष्ण औषधालयका सञ्चालक वसन्त । हामी कस्ता छौं भने, आयुर्वेदमा औषधिको पनि औषधि भएको भन्दै वेद शास्त्रहरूमा सर्वौषधि भनिएको बेसार बिहान पानीमा र बेलुका दूधमा राखेर खाएरै बेसारको खिल्ली उडाउँछौं । बेसारलाई उडाएर हामीले आफ्नै संस्कृतिको, आफ्नै जीवनशैलीको खिल्ली उडायौं र ताली पिट्यौं । आकाशतिर हेरेर थुक्नु बराबर होइन यो ?
हाम्रा यस्तै स–साना स्वार्थका कारण नेपालमा एलोप्याथी भित्र्याउने मात्र हैन, सिंहदरबार वैद्यखानालाई फस्टाउन नदिने प्रयाससम्म भए । हाम्रा घरका औषधि हेला हुन थालेपछि भारतीय आयुर्वेद कम्पनीहरू यहाँ भित्रिए । अनि यहाँका जडीबुटीहरूलाई उनीहरूले निर्बाध रूपमा लगिरहे ।
इतिहासविद् महेशराज पन्तका अनुसार, इसाई पादरीले ल्याएका औषधिले आयुर्वेदिक औषधिलाई विस्थापित गर्दै लगेका हुन् । चर्च बनाउने पादरीहरूले औषधि बोकेर ल्याए । हाम्रो खरानी–पानीको ठाउँमा सिंगै गाउँलाई जुकाको औषधि खुवाए र उनीहरूले एलोप्याथी औषधिका साथमा हाम्रो मन पनि जिते । यसरी धर्मान्तरण र आयुर्वेदबाट एलोप्याथीमा सार्ने काम पादरीहरूले गरेका थिए । कुनै बेला सहरमा एलोप्याथी नै आउँदा पनि नेपाली उत्पादन किन्नुपर्छ, एलोप्याथीले हाम्रो पैसा बिदेसिन्छ भन्ने अभियान नै चल्थ्यो । पैसा बाहिर नजाओस् भनेर पनि मान्छेहरू आयुर्वेद नै प्रयोग गर्थे । अहिले त मुखले राष्ट्र र राष्ट्रियता अलाप्ने तर काम पराईकै लागि गर्ने भैसकेका छौं हामी ।
एलोप्याथी नआउँदा घाउ चिर्ने काम वैद्य मात्र हैन, नाउहरूले पनि गर्थे । आयुर्वेदको उपचारबाट रोग सन्चो हुने मात्र हैन, काटेका ठाउँहरूमा दागै रहन्नथ्यो । रोगको उपचारलाई व्यावसायिक मात्र हैन, सामाजिक सेवाको कोणबाट हेरी आयुर्वेदको अध्ययन सशक्त बनाई अघि बढाउनुको साटो एलोप्याथी भित्र्याइयो । सन् १९४० को दशकअघिसम्म, एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गर्न नथालिएसम्म आयुर्वेदीय र एलोप्याथिक उपचार पद्धतिमा खास फरक थिएन । अष्टांग आयुर्वेदमध्ये सात अंग क्रमशः प्रयोगमा आउन छोडेपछि आयुर्वेदलाई साँच्चै भन्ने हो भने कायचिकित्साले मात्र धानिरहेछ । ३० वर्षसम्म नेपालको हर्ताकर्ता बनेका जंगबहादुरसमेत चिरफार गर्नुपरे एलोप्याथीको उपचारमा जान्थे, होइन भने औषधिचाहिँ आयुर्वेदकै खान्थे भनी तात्कालिक ब्रिटिस दूतावासका डाक्टर ओल्डफिल्डले लेखेको भनेर उपर्युक्त पुस्तकमा पन्तले उल्लेख गरेका छन् ।
अहिलेका औषधिको आविष्कारको पहिलो ज्ञानका रूपमा रहेको आयुर्वेदमा पनि चरक र सुश्रुतसहिंता अग्रभागमा छन् । चिकित्सा पद्धतिले आयुर्वेदका ज्ञाता सुश्रुतलाई चिकित्सा पद्धतिकै पिताका रूपमा चिन्छ । भोल्तेयर र मुलरलाई पछ्याउने हो भने पनि उनीहरूको हरेक खोजमा वेद र उपनिषद्का चर्चा भेटिन्छन् । संसारले ज्ञानको खानीका रूपमा हेरेको पूर्वको शिक्षा सनातनी, जैन र बुद्ध धर्मका गुरुहरूले अध्यात्मतिर डोर्‍याएपछि आयुर्वेदको अध्ययन र यसको प्रयोगमा कमी आउँदै गएको हो । सयौं वर्षदेखि संस्कृत विद्याका अरूअरू शास्त्रमा जस्तै आयुर्वेदमा पनि नयाँ–नयाँ आविष्कार र खोज बन्द भएको छ । एलोप्याथी मिसाई आयुर्वेदको नाउँमा चलाइएको खिचडी पढाइ, मल्टिनेसनल कम्पनीको कस्मेटिक प्रचारमा जनता मात्र हैन सरकार पनि परेपछि भने आयुर्वेदको प्रभाव झनै खुम्चिन पुग्यो । अझ खानदानी वैद्यहरूले पनि पूरै आयुर्वेद थाम्न नसकी कामचलाउ रूप मात्र कायम राखेकाले आयुर्वेद अनाथ बन्न पुगेको छ । तैपनि ती वैद्यहरूले जेनतेन जुन काम गरेका छन्, त्यसको प्रशंसा नगरी सुखै छैन ।
पुस्तौंदेखि पशुपतिको घाट कुर्न पुर्‍याइएकाहरूलाई बचाउने घाटे वैद्यहरू पनि आयुर्वेद के हो भन्ने कुराका साक्षी हुन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तिनले थप २० वर्ष बचाएका उदाहरण धेरै छन् । अस्पताल नै नदेखी सय वर्ष स्वस्थ भएर बाँचेकाहरू अहिले पनि हाम्रा गाउँघरमा भेटिन्छ । यही हो हाम्रो आयुर्वेद या भनौं हाम्रो जीवनपद्धति । तर, हामी भने आफ्नो जीवन्त संस्कृतिलाई विस्थापित गरी आफ्नो आरोग्यको पाइलो आफैं मेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७७ ०८:१४